EFESỌS 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (EFE 5)
Ebe unu bụ ụmụ Chineke, gbalịanụ ka unu dịrị ka ya, dị ka ụmụ si agbalị ịdị ka nna ha.
Ka ịhụnanya bụrụ ihe pụtara ìhè na ndụ unu, ụdị ịhụnanya nke Kraịst hụrụ anyị mgbe o nyere Chineke ndụ ya nꞌihi anyị, dị ka onyinye na aja iwepụ mmehie anyị, Aja a tọrọ Chineke ụtọ, nꞌihi na o nwere isisi ụtọ nꞌihu Chineke.
Ka ahapụ ịkọta akụkọ mmehie ịkwa iko, ma ọ bụ nke adịghị ọcha, ma ọ bụ nke inwe anya ukwu nꞌebe ihe ndị ọzọ nꞌetiti unu nwere dị. Ka ntị ọ bụla hapụ ịnụ ya, nꞌihi na omume ọjọọ dị otu a ekwesịghị ụmụ Chineke.
Ọ dịkwaghị mma ka unu na-ekwu okwu rụrụ arụ ma ọ bụ okwu nzuzu. Kama werenụ oge unu gwarịtaa onwe unu ihe banyere ịdị mma Chineke. Werekwanụ oge unu kelee Chineke ekele.
Matanụ nke ọma na onye na-akwa iko, ma ọ bụ mmadụ na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye anya ukwu, nꞌihi na anya ukwu dị ka ikpere arụsị, enweghị ike ịbata nꞌalaeze Kraịst na Chineke.
Unu ekwela ka onye ọ bụla jiri okwu nzuzu duhie unu. Ana m ekwu ihe banyere ndị ahụ na-asị na mmehie ndị a abụghị ihe ọjọọ, nꞌihi na iwe Chineke na-adakwasị ndị na-eme ha.
Ka unu na ndị na-ekwu ụdị okwu a hapụ inwe mmekọrịta ọ bụla.
Nke a bụ ihe unu na-eme nꞌoge gara aga, ma kemgbe unu jiri bụrụ ụmụ Chineke unu nọ nꞌime ìhè. Ya mere, bienụ ndụ dị ka ndị nọ nꞌìhè.
Nꞌihi na ebe ọ bụla ìhè dị, ebe ahụ ka ịma mma nile na ezi omume nile na eziokwu nile dị.
Gbalịanụ mgbe nile ịchọpụta na ịmụta ihe na-atọ Chineke ụtọ.
Unu etinyela aka nꞌọrụ ọchịchịrị ọ bụla, kama meenụ ka ọrụ ọjọọ ndị a pụta ìhè ka ndị mmadụ mata otu ha siri dị njọ.
Ọ bụ ihe ihere ikwu okwu banyere ihe ndị na-amaghị Chineke na-eme na nzuzo.
Ma mgbe unu mere ka ọrụ ọjọọ ha pụta ìhè, ìhè ga-achakwasị mmehie ha, gosikwa ihe ọ bụ.
Nꞌihi na ìhè na-eme ka a hụzie ihe ọ bụla anya nke ọma. Ọ bụ nꞌihi nke a ka akwụkwọ nsọ jiri kwuo sị, “Bilie gị onye na-arahụ ụra. Site nꞌọnwụ bilie! Kraịst ga-emekwa ka ìhè ya mụkwasị gị.”
Ya mere, kpachapụnụ anya otu unu si ebi ndụ unu. Unu ebila ndụ dị ka ndị nzuzu, kama bienụ ndụ dị ka ndị maara ihe.
Jirinụ oge nile unu nwere rụọ ọrụ ọma, nꞌihi na ụbọchị ndị a dị njọ.
Unu emela dị ka ndị na-enweghị uche, kama gbalịanụ ịchọpụta ihe Chineke chọrọ ka unu mee, meekwa ya.
Na-enyenụ Chineke Nna ekele ụbọchị nile nꞌihi ihe nile nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
Sọpụrụnụ Chineke site nꞌido onwe unu nꞌokpuru ibe unu.
Unu bụ ndị nwanyị a na-alụ alụ, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu dị ka unu si doo onwe unu nꞌokpuru Onyenwe anyị.
Nꞌihi na nwoke bụ isi nwụnye ya, dị ka Kraịst siri bụrụ isi nzukọ ya bụ chọọchị, na onye nzọpụta nke nzukọ ahụ bụ anụ ahụ ya.
Ya mere, dị ka nzukọ Kraịst si edo onwe ya nꞌokpuru Kraịst, otu a ka ụmụ nwanyị nwere di kwesịrị ido onwe ha nꞌokpuru di ha.
Jisọs Kraịst sitere nꞌọnwụ ya mee ka nzukọ ya dịrị nsọ, site na nsacha nke baptizim na nke okwu Chineke.
Ka nzukọ ahụ bụrụ nzukọ jupụtara nꞌebube, na ịma mma, na ịdị ọcha na-enweghị ntụpọ ọ na-enweghibụla.
Otu a ka ndị nwoke kwesịrị isi hụ nwụnye ha nꞌanya dị ka ha bụ anụ ahụ ha. Nꞌihi na onye ọ bụla hụrụ nwụnye ya nꞌanya na-ahụ anụ ahụ ya nꞌanya.
Mmadụ ọ bụla adịghị nke kpọrọ anụ ahụ ya asị. Kama ọ na-azụ ya na-edozikwa ya. Nke a bụkwa ihe Kraịst meere anụ ahụ ya bụ chọọchị.
Nꞌihi na anyị nile bụ akụkụ anụ ahụ ya.
Dị ka akwụkwọ nsọ kwuru, “Nꞌihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ ụlọ nne na nna ya ka e jikọtaa ya na nwụnye ya. Ha abụọ ga-abụkwa otu.”
Amaara m na okwu a siri ike ịghọta, ma ọ bụ ihe e ji ama atụ banyere njikọta e jikọtara Kraịst na nzukọ ya.
Ya mere, ọ dị mkpa na nwoke ga-ahụ nwụnye ya nꞌanya dị ka onwe ya. Nwanyị ọ bụla kwesịkwara ịsọpụrụ di ya.